Kooxda Liverpool oo wiiqday awoodii Chelsea misane cadeysay in ay wali u taagantahay hanashada horyaalka Premier League +Sawiro – Gool FM
Kooxda Liverpool oo wiiqday awoodii Chelsea misane cadeysay in ay wali u taagantahay hanashada horyaalka Premier League +Sawiro
(England) 14 Abriil 2019 Kooxda Liverpool ayaa guul micno badan ugu fadhisa oo 2-0 ka gaartay Kooxda Chelsea oo uu mugdi sii galay booskooda kaalmaha loogu soo boxo tartanka Champions League.
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa ahaa mid aad u adag oo ay labada Kooxaba awoodi waayeen in ay dhaliyaan gool wallow Kooxda Liverpool ay ka fursado badneed dhigeeda Chelsea.
60% Kooxda Liverpool ayaa ku wanaagsaneed kubad heysashada ciyaarta halka Kooxda Chelsea ay la timid 40% kubad heysashada qeebtii koowaad ee dheesha.
Kooxda Chelsea ayaa sameesay hal isku day oo gool loo filan karay, balse uma suurta galin in ay jaaniskaas ay gool u badalaan.
Dhica kale Kooxda Liverpool oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa dhankeeda sameesay hal jaanis oo gool loo filan karay wallow ay sameeyeen isku dayo badan balse daafacyada Kooxda Bules ayaa is hortaagay.
Qeebtii Koowaad ee ciyaarta ayaa ku idlaatay bar-baro gool la’an, waqti nasiino iyo talo soo qaadasho kaddib waxaa dib loo anba qaaday qeebtii dambe ee ciyaarta oo aheyd mid ka xiiso badan qeebtii hore.
Reds ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan qeebtii dambe ee ciyaarta iyaga oona durba la yimid labo gool oo is xig xigay oo naxdin iyo nabar ku noqday taageerayaasha Kooxda Chelsea.
Goolka hore waxaa dhaliyey laacibka reer Sinagal ee Mane kaddib caawin uu ka helay Al-kabitaano Henderson daqiiqadii 51-aad ee ciyaarta.
Daqiiqad oo qura ayaa ka soo wareegatay markii laga dhaliyey goolka labaad ee ciyaara, laacibka reer Masar Mohamed Salah ayaa darbo mad fac oo kale ah daba mariyey gool haye Arrizabalaga oo goosha u qabta Bules, natiijada ciyaarta ayaana noqotay 2-0.
Kooxda Chelsea laacibkooda Eden Hazard ayaa labo fursadood oo gool loo filan karay ka qasaariyey Kooxdiisa Bules oo aan ka sabrin ciyaarta.
Liverpool ayaan dhankoodu ka quusan in ay raadiyaan gool kale oo sedexaad balse uma suura galin jaanisyo badan oo ay heleen in ay u sarifaan gool.
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay 2-0 oo ay ku adkaatay Kooxda Liverpool oo wali ka quusan hiigsigeeda hanashada horyaalka Premier League.
Kooxda Man City oo guul ay u riyaaqeen ka gaaray Kooxda Crystal Palace +Sawiro
HORDHAC : Watford VS Arsenal? Xogta kulanka iyo rikoorada laga diwaan giliyey ciyaarta